Ukwenza kwe-Indy kwiShishini: Umhla obekiweyo ungomso! | Martech Zone
Ukwenza kwe-Indy kwiShishini: Umhla obekiweyo ungomso!
NgoLwesibini, Julayi 28, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Xa ndandiseHouston, esinye sezithethi saqaphela indlela inkampani eza kuchitha ngayo imali engaphezulu kwigumbi labo lokungenela kunokuba baya kuthi ubukho online. Akukho mntu ubuza umenzi wezingqengqelo ukuba yintoni imbuyekezo kutyalo-mali kwisofa entle yesikhumba kwigumbi lokungenela - kodwa wonke umntu uyasika kunye neeselesi ngexabiso website entsha.
Iinkampani ezininzi zisityeshela isicwangciso sisonke-sixakeke kakhulu ngezicwangciso zazo zangoku zokukhathazeka malunga qhinga lokuthengisa online. Indawo yakho iya kufumana iindwendwe ezininzi kunendawo yakho yokulinda, uyilo olukhulu kunye nesicwangciso emva kwayo! Lixesha lokuba kwenziwe utshintsho, kodwa kunzima ukuthethelela inkcitho… phantse ayinakwenzeka koluqoqosho. Kude kube ngoku…
Ukuba ulishishini kumbindi weIndiana, nali ithuba! Kwinkampani enye yasekhaya, uKhuphiswano lwe-Indy Business makeover luya kuba luhlaziyo olufanelekileyo. Ifemu ephumeleleyo iya kufumana iinkonzo zentengiso, iserver entsha, iwebhusayithi kunye nefenitshala yeofisi phakathi kwamanye amabhaso. Ngaphezulu kwe $ 80,000 yeemveliso ezinikezelweyo kunye neenkonzo ovela kumashishini asekuhlaleni, i-Indy Business Makeover Competition ithi koosomashishini abasebenza nzima, "yonwabele ukwenza kwethu okuhle, uyifumene."
Umhla wokugqibela wesicelo ngomso-Julayi 29, 2009! Jonga uluhlu lwamabhaso- zibandakanya iphakheji yebhlog ye-40 eneCompendium Blogware, nayo! Ndiza kubona ukuba ndingathetha na neqela ukuba lindivumele ndiphose i-3,000 yekota yokubonisana ngekota kwindandatho nayo- ukunceda ngezicwangciso zomxholo, ukudityaniswa kwemithombo yeendaba kwezentlalo, ukujonga esweni, njl.
Umsebenzi omkhulu ngabantu e Ibhokisi encinci kwaye Intengiso yePivot yokubeka olu khuphiswano lukhulu.
tags: ngokuzenzekelayoidatha yebhidiIbhodi yebhodiGuy KawasakiIindlovuIivars zebhodi yebhodiIivars chowderlwitshisointengiso yevidiyo
Qonda. Yiba kwiBrand. Yakha ukuthembana.
Ukubeka ixabiso kwiMidiya yokuNxibelelana noKhenketho